Shina : Sazy valo taona an-tranomaizina ho an’ilay tomponà cybercafe · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Oiwan Lam Nandika (es) i Laura Rebollo, Noele Belluard-Blondel, Salohy Randriafanomezantsoa
Voadika ny 14 Avrily 2019 4:50 GMT
Voaheloka higadra 8 taona an-tranomaizina noho ny ‘’fanakorontanana ny Fanjakana’’, i Cao Haibo, 27 taona, tomponà cybercafe iray tamin’ny 31 Oktobra 2012 tao Kunming, tao amin’ny faritanin’i Yunnan, araka ny vaovao avy ao amin’ny New York Times tamin’ny 01 Novambra 2012. Araka ny vaovao farany sy araka ny tranonkala Tienwang 64, nampiakatra ny raharaha ny mpisolovavan’i Cao, Ma Xiaopeng ny 5 Novambra 2012.
Cao Haibo. Sary tao amin'ny 64 Tianwang
Tsy azo natrehina ny fizotry ny fitsarana. Tsy nahalala mikasika ny raharaha manokana nitondrana azy teo anoloan’ny fitsarana ny vahoaka. Nihevitra ny sasany fa nisy hifandraisany tamin’ny Ligin’ny QQ-chat ho fanomezana sehatra ho an’ny tanora ao amin’ny Firenena Shinoa (“振华会”) izay naorina tamin’ny volana Septambra 2011 izany. Nilaza izany tamin’ny iraky ny New York Times ny mpiaro ny zon’olombelona ao Shina :
Nanamarika i Renee Xia, Tale iraisampirenena Mpiaro ny Zon’Olombelona any Shina, izay nitsikera ny fanenjehana an’i Cao fa notanana am-ponja tsy notsaraina nandritra ny 8 volana izy [ fanamarihana : raha ny marina, mety efa ho herintaona mahery aza], ary na dia ny fianakaviany aza dia tsy afaka nanatrika ny fitsarana. Ny fifampiresahana tao amin’ny vondrona an-tserasera hoy izy no hany ‘’heloka tokana’’ nanamelohana an’i Cao, izay niresadresahan’ny mpikambana ny hevitra toy ny fanavaozana demokratika sy ny zo araka ny lalampanorenana’’. Fitsarana sarintsariny ity raharaha ity. Maneho indray izany fa tsy mahalala afa-tsy ny fanehoana ny tsy firaharahiany ny fitsipi-dalàna i Shina.
Nanome fanazavana bebe kokoa momba ny fiandohany sy ny natioran’ity vondrona fifanakalozan-kevitra ity i Cao Yaxue avy ao amin’ny Seeing Red any Shina :
Manohana ny dikany vaovao izay mifanaraka amin’ny zava-misy ankehitriny momba ireo Fitsipika Telo avy amin’i Dr Sun Yat-sen i Cao Haibo, toy ny foto-kevitry ny Nasionalisma, ny foto-kevitry ny Demaokrasia, ary ny foto-kevitry ny fahafinaretana ara-tsosialy.
Nosamborina i Cao ny 21 Oktobra 2011, iray volana taorian’ny nifandraisany tamin’ny vondrona karajia (chat) ary voampanga aloha izy ny 25 Novambra 2011 tamin’ny ‘’ fandrisihana ny fanozongozonana ny fahefam-pitondrana’’, izay fiampangana madinika. Norahonana ny vadiny izay bevohoka 6 volana mba tsy hilaza ny raharaha amin’ny vahoaka. Herintaona taty aoriana, ny 1 Novambra 2012, notsaraina i Cao noho ny fiampangana goavana kokoa : ‘’fanozongozonana ny fahefam-panjakana’’ary voaheloka higadra 8 taona an-tranomaizina.
Koa satria talohan’ny Kongresim-bahoaka Nasionaly faha-18 no nitranga ny fanamelohana dia very ny fanantenan'ny ny olona amin’ny fanavaozana ara-politika sy ny adihevitra ara-politika teo ambanin’ny mariky ny fisokafana. Nandika teny ny fanehoan-kevitra vitsivitsy natao tao amin’ny Aterineto momba ity raharaha ity I Seeing Red any Shina :
Midika ny fanamelohana ny mpanohitra tahaka an’i Cao Haibo amin’ny fomba tena henjana tokoa, amin'ny andro alohan’ny Kongresim-bahoaka Nasionaly fa mandray fepetra hentitra sy tsy nisy indrafo ny Antoko amin’ny fikasana rehetra, manoloana ny ‘’mpanakorontana ny fiarahamonina’’, na dia amin’ny endrika viritoaly tsotra fotsiny aza, izay tarihin’ny karazana vondrona na fikambanana. Mampiseho ny isan’ireo tranga miha-mitombo hatrany fa mizotra mankany amin’ny fampirorohoana ara-politika i Shina mba hitazonana ny fahamarinan-toerana.
Nandika (es) i Laura Rebollo